XOG:- Xildhibaanada oo loo qeybin doonno qalab lagu ogaanayo musharaxa ay u codeeynayaan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Xildhibaanada oo loo qeybin doonno qalab lagu ogaanayo musharaxa ay u codeeynayaan
In ka badan 320 xildhibaan oo ka tirsan labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta Arbacadda ee soo socoto ay doortaan madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya, kaas oo dalka hogaamin doonna 4-ta sano ee soo socoto.
Illaa 23 musharax ayaa ku tartami doonno doorashadaasi, waxaana qaar ka mid ah musharixiintaasi ay yihiin kuwa hore xilal kala duwan uga soo qabtay dalka, halka kuwa kalena ay yihiin kuwa ku cusub siyaasadda Soomaaliya, balse jecel in dalka ay isbadel ka sameeyaan.
Inkastoo maalmihii ugu dambeysay ay soo baxayeen eedeymo ah in qaar ka mid ah dalalka dariska ah, gaar ahaan dowladda ITOOBIYA ay faragelin baahsan ku hayso doorashada Soomaaliya, ayaa hadane waxaa soo baxaya in la keenay nidaam cusub oo ay xildhibaanada wax ku dooran doonaan.
Ilo xog-ogaal ah ay heleeyso warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaysa koox ka tirsan sirdoonka Itoobiya ee dhawaan soo gaaray Soomaaliya ay xildhibaanadaasi u qeybin doonaan qalab isugu jira KHALIMAAN, OOKIYAALO ay ku rakiban yihiin kaamirooyin iyo qalab kale oo casri ah, kuwaas oo loogu talagalay in xildhibaanadaasi ay sawiro uga soo qaadaan warqadda ay ku codeeynayaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah musharixiinta u tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ee dalka hogaamin doonna 4-ta sano ee soo socota ayaa muddooyinkii ugu dambeysay wal-wal aad u xoogan ka qabay in qaar ka mid ah xildhibaanada uu lacagta siiyo ay musharax kale u codeeyaan.
Hadii uu dhaqan galo nidaamkaan cusub oo ay dowladda Itoobiya wadato ayaa waxaa meesha ka bixi doonna wal-walkaasi aad u baahsan uu hore u qabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Si kastaba ha ahaatee, lama oga qaabka ay guddiga anshaxa iyo ilaalinta doorashada dalka ay uga hortagi doonaan xogtaan cusub oo sheegaysa in xildhibaanada codadka doorashada dhiibanaya ay qalab casri ah ku sawiri doonaan warqadaha ay ku codeeynayaan, taas oo markiiba ku dhaceeysa meel kale oo gacantiisa ka baxsan.